माधवनारायणका व्रतालु पशुपति तीर्थ यात्रामा - Rastrakokhabar
माधवनारायणका व्रतालु पशुपति तीर्थ यात्रामा
२९ माघ २०७७, बिहीबार ११:५७
काठमाडौं, २९ माघ । पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि एक महिने माधवनारायण व्रत गरेका व्रतालु तीर्थ यात्राका लागि पशुपति आएका छन् । बुधबार माघकृष्ण चतुर्दशीका दिन बेलुकी पशुपति आएका उनीहरुलाई बिहीबार औंसीका दिन पशुपति दर्शन गराइन्छ ।
माधवनारायण व्रतालु पशुपति आएको बेला आर्यघाटमा शव नजलाउने चलन रहेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डा. प्रदीप ढकालले जानकारी दिएका छन । उनका अनुसार ‘माधव नारायणका व्रतालु पशुपति आएका बेला आर्यघाटमा शव जलाउन रोकिन्छ । भष्मेश्वरतर्फ भने शव जलाउन दिइन्छ ।’
माधवनारायणका व्रतालु बुधबार साँझ करिब सात बजेतिर पशुपति आइपुगेका थिए । उनीहरु बिहीबार १०/११ बजे पशुपतिबाट प्रस्थान गर्छन् । उनीहरु पशुपति आएदेखि नफर्किएसम्म आर्यघाटमा शव जलाउन रोकिने डा. ढकालको भनाइ छ ।
माघ कृष्ण औंसी (आज)का दिन बिहान पशुपतिस्थित आर्यघाटमा व्रतालुले स्नान गर्ने व्रत विधि रहेको छ । स्नानपछि पशुपतिमा पूजा आराधना गरी जयबागेश्वरीसम्म जल चढाउने विधि छ । व्रतालुले जयवागेश्वरीबाट सानो गौचरण गएर दिउँसोको भोजन गर्ने परम्परा छ । माधवनारायण व्रतालुले एक महिनासम्म एक छाकमात्र भोजन गर्ने व्रत विधि छ ।
Previous Post	रामकुमारी झाँक्रीलाई सोधपुछका लागि प्रहरीले बोलायो
Next Post	रामकुमारी झाँक्रीलाई पक्राउ गर्न प्रहरी उनको निवासमा
प्रसिद्ध बिस्केट जात्रा यस वर्ष पनि नहुने
आज पूर्णिमा अर्थात् होली पर्व, हिमाली तथा पहाडी जिल्लाहरुमा मनाईंदै
१५ चैत्र २०७७, आईतवार ०६:५८